Ny Tilikambo Fiambenana Notsorina: Inona no Fanapahan-kevitra Farany?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hindi Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Nzema Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tamoul Tarasque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Ny Tilikambo Fiambenana Notsorina
Nanomboka tamin’ny laharana Jolay 2011 dia navoaka ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana notsorina amin’ny teny anglisy, ary natao andrana nandritra ny herintaona izany. Tapitra izao ilay andrana ary tapaka ny hevitra fa hotohizina ny famoahana an’ilay gazety notsorina.
Hisy amin’ny teny espaniola sy frantsay ary portogey koa ilay gazety notsorina manomboka amin’ny Janoary 2013.
Tsy teny anglisy no fitenin-drazan’ny olona sasany manatrika fivoriana amin’ny teny anglisy any amin’ny Efitrano Fanjakana. Natao hanampiana azy ireny ny gazety notsorina.
Taorian’ny nivoahan’ny laharana voalohany dia efa betsaka no nandefa taratasy fankasitrahana. Izao, ohatra, no nosoratan’i Rebecca, 64 taona, mipetraka any Liberia, ary tsy tany an-tsekoly mihitsy: “ Mianatra mamaky teny aho. Mamaky Ny Tilikambo Fiambenana aho nefa tsy azoko ilay izy indraindray. Tiako ilay gazety notsorina satria azoko. ”
Betsaka ny ray aman-dreny mampiasa ny gazety notsorina mba hanampiana ny zanany hanomana ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana. Anisan’ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io.
Hoy i Rosemary, izay mitaiza ny zafikeliny telo: “ Sarotra ny nianatra Ny Tilikambo Fiambenana miaraka amin’izy telo vavy. Tsy maintsy nampiasa diksionera izahay mba hijerena ny dikan’ny teny maro. Nandany fotoana be namantatra ny filaharan’ny teny tao amin’ny lahatsoratra sasany izahay, ka matetika no tsy azon’ny ankizy intsony ny hevi-dehibe. Izao kosa izahay manam-potoana malalaka hamakiana ny andinin-teny sy hijerena ny ifandraisany amin’ilay fianarana. ”
Video: “Misaotra An’i Jehovah Aho fa Nanampy Ahy Izy”
Video: Mety Tsara Hampianarana ny Ankizy Ny Tilikambo Fiambenana Notsorina
Video: Manampy ny Ankizy any Danemark Ny Tilikambo Fiambenana Notsorina